कोरोना संक्रमणबाट कुन प्रदेशमा कति जना निको भए? | पहिलो बोली
कोरोना संक्रमणबाट कुन प्रदेशमा कति जना निको भए?
३२२३ पटक पढिएको
२०७७–०२–१७/काठमाडौं– नेपालमा हालसम्म १७ सय ९८ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ, जसमा २२१ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने ८ जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ । कोरोना संक्रमण भएर उपचार गराई निको हुनेहरुमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ मा रहेका छन् । प्रदेश २ मा हालसम्म ६९४ जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये १०४ जना उपचारपछि निको भईसकेका छन् । मृत्यु हुने ८ जनामध्येमा प्रदेश २ का १ जना रहेका छन् । त्यस्तै, संक्रमितको संख्याका हिसाबले दोस्रोमा रहेको प्रदेश ५ हालसम्म ४८ जना निको भईसकेका छन् । यो प्रदेशमा कुल संक्रमित संख्या ६ सय २१ रहेको छ, जसमध्ये ४८ जना निको भएका हुन् । मृत्यु हुनेमा सर्वाधिन ३ जना यहिँ प्रदेशका रहेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा कुल संक्रमित १६८ मध्ये ३० जना निको भएका छन् । बागमति प्रदेशमा पुष्टि भएका कुल संक्रमित ४६ मध्ये २९ जना निको भएका छन भने मृत्यु २ जनाको भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म कुल संक्रमित संख्या २६ जना रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पुष्टि भएका सबै संक्रमितमध्ये ३ जना निको भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पुष्टि भएका १९८ संक्रमित मध्ये हालसम्म सबै जना उपचाररत रहेका छन् भने १ जनाको मृत्यु भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशमा हालसम्म भेटिएका ४५ जना संक्रमित मध्ये ७ जना निको भएका छन भने १ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हालसम्म नेपालभर विभिन्न स्थानमा गरि कुल २२१ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर फर्किसकेका छन् ।